Otu esi akwụ ụgwọ maka iwu na webụsaịtị anyị site na mbufe Bank International S — HGH Thailand | Ụlọ ahịa ọgwụ Bangkok | USA
Iji zipu ego na mba ọzọ, banye na akaụntụ akụ gị ("Banki bankingntanetị", "onye ahịa n'ịntanetị") n'ime ụdị nnyefe mba ofesi, wee dejupụta ozi dị mkpa gbasara onye nnata, ị ga-enwe ike izipu ego na mba ofesi mmefu nke onye nata.
Bank ọ bụla dị n'obodo gị na-enye ohere ịnyefe SWIFT. Nleta onwe gị na Bank ma gwa gị ebumnuche gị ịme azụmahịa ma nye Bank ozi banyere onye nnata ozugbo na onye ọrụ Bank. Ndị ọrụ ụlọ akụ ga-eme ma mezue gị niile, usoro azụmahịa agaghị ewe ihe karịrị 15 nkeji.
Iji nyefee ego na mba ọzọ onye ahịa kwesịrị ịma nkọwa zuru ezu nke SWIFT nke anụ ahụ ma ọ bụ ndị iwu kwadoro, nke a ga-eziga nyefe.
Gbanyere na: ịkwụ ụgwọ
Previous isiokwu Ịkwụ ụgwọ Bitcoins maka HGH na kaadị akwụmụgwọ - na-enweghị ịmepụta obere akpa ego Bitcoin (nke kachasị 5-10 min)
isiokwu na-esonụ GHkwụ ụgwọ HGH site na ndenye aha. Olee otú ọ na-arụ ọrụ?
Mario - October 18, 2019
Nke mbụ, tụọ egwu ịghọ aghụghọ
mgbe ha natasịrị ego, enwetara dHL n'otu ụbọchị ahụ!
ezigara ya na intali n’ụbọchị 3